Nokia | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Nokia Android OS ဖြစ်တဲ့ Nokia X,XL,X2,X+ စသည့် ဖုန်းတွေကို အလွယ်တကူ Firmware ပြန်တင်နည်း
ကဲ ဒီတစ်ခါ ဆိုင်သမားတွေ နဲ့ လေ့လာနေတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အတွက် အဖိုးတန်တဲ့ Nokia Android
Os သုံး ဖုန်းတွေကို အလွယ် တစ်ကူ ဘာ Box မှ မသုံးဘဲ Offical Firmware ပြန်တင်နည်းကို
အရင်ဆုံ ကွန်ပျူတာမှာ Nokia နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Software Driver တွေ အရင်သွင်းထားလိုက်ပါ ပြီး
ရင် မိမိဖုန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Firmware ဖိုင်ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူ လိုက်ပါ။
▼ XL - RM 1030 ▼ ▼ X+ - RM 1053 ▼ ▼ X2 -RM 1013 ▼ ▼ X - RM 980 ▼
မိမိ ဖုန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Firmware ကိုဒေါင်းပြီး Zip ဖြည်လိုက်ပါ ပြီးရင် FlashTools ကိုအောက်
▼ Nokia FlashToolsကိုဒေါင်းရန် ▼
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Flashtools Zip ကို ဖြည်ပြီး အထဲက Nokia X Flasher ဖိုဒါကို ဖြည်လိုက်ပြီး
ပြီးရင် ဖုန်းကို ဘထရီ ဖြုတ် ပြန်တပ်ပြီး Vol- up + Power တူတူ ဖိနှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်
ဆက်ပေးလိုက်ပါ ဖုန်းက fastboot mode ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင် စောစောက ဖွင့်ထားတဲ့ Flash
tools နေရာမှာ ဖိုင်ဖြည်ဖို့ အကွက်လေးတွေ တက်လာပါမယ်။
ပြီးရင် စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ မိမိဖုန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ firmware ဖိုင်ကို မှန်အောင်ရွေးဖြည့်
ပေးလိုက်ပါ ဖြည့်နည်းက အလွယ်လေးပါ System နေရာမှာ နှိပ်ပါ ပြီးရင်စောစောက ဒေါင်း
ထားတဲ့ Firmware ဖိုဒါထဲက System ဖိုင်လို့ ရေထားတဲ့ စာတန်း ရှိတဲ့ ဖိုင်ကို ရွေးပါ ကျန်တဲ့
ဟာတွေလဲ တူတူပါဘဲ အကုန်မှန်အောင် ရွေးဖြည့်ပါ ပြီးရင် အောက်နားက Start Flashing
နေရာမှာ နှိပ်ပြီး စောင့်နေပါ ၅ မိနစ်လောက် ကြာပါတယ် အောက်က အတန်းမှာ အစိမ်ရောင်
ပြည့်အောင် စောင့်ပေးလိုက်ပါ အာလုံးပြည့်သွားပြီ ဆိုရင် ဖုန်းကို Reboot ချပြီး ဘထရီ ခဏ
ပြန်ထုတ်ပြီး ပြီးရင် ပြန်တပ်ပြီး power ဖွင့်ပေး လိုက်ပါ။
စစမှာတော့ boot တက်ဖို့5 မိနစ်လောက် စောင့်ရ မှာပါ ကဲ Nokia Android Os ဖုန်းတွေ အ
လွယ်တစ်ကူ Firmware တင်လို့အောင်မြင်ပါပြီ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် ထားတာပါ။
From : http://thaiinmyanmarit.blogspot.com/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, January 11, 20155comments:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Nokia, Phone Application
Nokia Firmware တွေကို အလွယ်တကူ Download နိုင်မည့် Nokia Firmware Suite v2.0
မိမိ ဖုန်းရဲ့ Product Code ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Firmware Download ဆွဲလို့ ရပါတယ်။ သူ့ဆော့ဝဲထဲ ကနေ
Download ဆွဲလို့ ရသလို Copy Links လုပ်ပြီး IDM မှာ Add URL လုပ်ပြီး IDM နဲ့ Download ဆွဲ
▼ play store ▼
From : Pyae Phyo (MMiTD) by ThanToeAung
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Sunday, September 28, 20143comments:
ကဏ္ဍ Download-Manager, Firmware, Nokia, Phone Application
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, August 17, 20143comments:
Nokia ဖုန်း တွေမှာ application သွင်းရင် Certificate error မဖြစ် တော့ အောင် Hack နည်း (၂)
Nokia ဖုန်း တွေမှာ တစ်ချို့ application တွေ သွင်းရင် Certificate error ဆိုတာ မျိုး ပြပါတယ်။ အဲဒီ လိုမျိုးတွေ မဖြစ်
အောင် အရင်က တရုတ် website တွေမှာ ဖုန်းရဲ့ IMEI number နဲ့ certificate လျှောက် ပြီးမှ သွင်းရ ပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒါ တွေလည်း မရတော့ ပါဘူး။
ဒီနည်းလေး ကိုလည်း စမ်းသပ်တာ အောင်မြင်လို့ ပြန် လည် ဝေမျှ ပေးလိုက် ပါတယ်။
အရင်ဆုံး ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက် လိုက်ပါ။ ဖုန်းရဲ့ memory card location ကွန်ပျူတာ မှာ ပေါ်လာ ပြီ ဆိုရင်
တကယ်လို့ ဖုန်းရဲ့ memory card location က E:/ ဆိုရင် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ။
တကယ်လို့ ဖုန်းရဲ့ memory card location က F:/ ဆိုရင် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ။
ကိုယ့် Drive နဲ့ ဆိုင်တဲ့ zip ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး ပြီ ဆိုရင် zip ဖြည် လိုက်ရင် Private ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ folder
လေး တစ်ခု ရလာ ပါမယ်။ အဲဒီ folder ကို ဖုန်း memory card ထဲကို ထည့် လိုက်ပါ။ ‘Private’ folder ကို ထည့်
ရာမှာ ဖုန်း memory card ရဲ့ ဘယ် folder အောက် ကို မှ မထည့် ပါနဲ့ ။
Memory card ရဲ့ main directory အောက် မှာပဲ ထည့်ပါ ။ ဥပမာ – memory card ရဲ့ Drive location က F: ဆို
ရင် ‘Private’ folder လေးကို F: အောက်မှာပဲ ထားပါ။
ပြီးရင် Dr.web Antivirus ကို ရယူ လိုက်ပါ ။
Dr.web antivirus ကို download ရယူ ပြီး ပြီ ဆိုရင် ဖုန်း ထဲမှာ install လုပ် လိုက်ပါ။ ဖုန်း ထဲမှာ install လုပ် ပြီး
ပြီ ဆိုရင် Dr.Web Antivirus ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။
အောက် က ပုံ အတိုင်းပါ။
Dr.Web Antivirus ထဲကို ရောက် ပြီ ဆိုရင် Option ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Quarantine ထဲကို ၀င်ပါ။ အောက်ပါ ပုံ အတိုင်းပါ ။
Quarantine ထဲကို ရောက် ပြီ ဆိုရင် Option ကို နှိပ် ပါ။ ပြီးရင် Select all ကို နှိပ် ပါ။ အောက် က ပုံ အတိုင်းပါ။
ပြီးရင် option ကို ပြန် နှိပ် ပါ။
Restore ကို နှိပ် ပါ။
ပြီးရင် Rom Patcher Plus ကို ဖုန်း ထဲကို သွင်းရ ပါမယ်။ အောက်မှာ ရယူ လိုက်ပါ။
download လုပ်ပြီး ပြီ ဆိုရင် ဖုန်း ထဲမှာ install လုပ် လိုက် ပါ။ ပြီးရင် Rom Patcher Plus ထဲကို ၀င်ပါ ။
ပြီးရင် install server RP+ v1.4 နဲ့ Open4all RP+ ကို နှိပ် ပါ။
နှစ်ခု စလုံးကို နှိပ်ပြီးရင် ဘေးက icon လေးမှာ အစိမ်းရောင် လေးတွေ ဖြစ်နေ ရပါမယ်။ အောက်ပုံ အတိုင်းပါ။
ဒါ ဆိုရင် certificate error မဖြစ် အောင် hack လို့ ပြီး ပါ ပြီ ။ အရင် တုန်း က ဖုန်း ထဲမှာ သွင်းရင် certificate error ဖြစ်
ဖြစ် နေတဲ့ application တွေကို ဖုန်း ထဲမှာ သွင်း ကြည့်ပါ။
certificate error မဖြစ် တော့ဘဲ အဆင် ပြေ ပြေ သွင်းလို့ ရသွား တာကို တွေ့ရ ပါလိမ့် မယ်။
ကဏ္ဍ Nokia, ဖုန်းနည်းပညာ
All Nokia Flash File စုစည်းမှု !
“Nokia ” ဖုန်းလေး တွေရဲ့ Flash File တွေကို တနေရာ တည်းမှာ စုစည်းထားတဲ့ ဆိုဒ်လေး တဆိုဒ် လမ်းညွှန် ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ…။ ဖုန်းတော်တော် များများလည်း စုံတယ်ဗျာ…။
NOKIA 100 – RH-130/
NOKIA 100 – RH-131/
NOKIA 101 – RM-769/
NOKIA 108 – RM-945/
NOKIA 108 Dual SIM – RM-944/
NOKIA 110 – RM-827/
NOKIA 111 RM-810/
NOKIA 112 – RM-837/
NOKIA 113 – RM-871/
NOKIA 1202 – RH-111/
NOKIA 1202 – RM-111/
NOKIA 1208 – RM-647/
NOKIA 1280 – RM-647/
NOKIA 1616 – RH-125/
NOKIA 1616 – RM-125/
NOKIA 1800 – RM-653/
NOKIA 206 – RM-873/
NOKIA 206-2060 – RM-872/
NOKIA 207 – RM-954/
NOKIA 208 – RM-948/
NOKIA 208 Dual SIM – RM-949/
NOKIA 220 – RM-970/
NOKIA 220 Dual SIM – RM-969/
NOKIA 225 – RM-1011/
NOKIA 2690 – RM-635/
NOKIA 2700 – RM-561/
NOKIA 2710C – RM-586/
NOKIA 2730 – RM-578/
NOKIA 301 Dual – 308 -RM-839/
NOKIA 301-308 – RM-840/
NOKIA 303-3030 – RM-763/
NOKIA 3109C RM-274/
NOKIA 3110C – RM-237/
NOKIA 3120C – RM-364/
NOKIA 3250 RM-38/
NOKIA 3500C – RM-272/
NOKIA 3600S – RM-352/
NOKIA 3610 Fold – RM-429/
NOKIA 500 – RM-750/
NOKIA 5130 – RM-495/
NOKIA 515 – RM-953/
NOKIA 515 Dual SIM – RM-952/
NOKIA 5800 – RM-356/
NOKIA 603 – RM-779/
NOKIA 6720 Classic – RM-424/
NOKIA 6730 Classic – RM-566/
NOKIA 6760 Slide – RM-573/
NOKIA 700 – RM-670/
NOKIA 701 – RM-774/
NOKIA 7210 – RM-436/
NOKIA 7230 – RM-604/
NOKIA 7310 – RM-379/
NOKIA 7370 – RM-70/
NOKIA 808 – RM-807/
NOKIA ASHA 311-3110 – RM-714/
NOKIA ASHA 200 – RM-761/
NOKIA ASHA 201-2010 – RM-799/
NOKIA ASHA 202 – RM-834/
NOKIA ASHA 203-2030 – RM-832/
NOKIA ASHA 205 Dual – RM-862/
NOKIA ASHA 205-2050 – RM-863/
NOKIA ASHA 208 – RM-948/
NOKIA ASHA 210 – RM-925/
NOKIA ASHA 210 Dual – RM-924/
NOKIA ASHA 220 Dual – RM-965/
NOKIA ASHA 230 Dual SIM – RM-986/
NOKIA ASHA 300-3000 – RM-781/
NOKIA ASHA 302-3020 – RM-813/
NOKIA ASHA 303 – RM-763/
NOKIA ASHA 305 – RM-766/
NOKIA ASHA 306 – RM-767/
NOKIA ASHA 308 – RM-838/
NOKIA ASHA 309 – RM-843/
NOKIA ASHA 310 – RM-911/
NOKIA ASHA 500 – RM-973/
NOKIA ASHA 500 Dual – RM-934/
NOKIA ASHA 501 – RM-899/
NOKIA ASHA 501 Dual SIM – RM-902/
NOKIA ASHA 502 Dual SIM – RM-921/
NOKIA ASHA 503 – RM-920/
NOKIA ASHA 503 – RM-947/
NOKIA ASHA 503 Dual SIM – RM-922/
NOKIA ASHA 503 SKD 4GB – RM-947/
NOKIA C1-01 – RM-607/
NOKIA C1-02 – RM-643/
NOKIA C2-00 – RM-704/
NOKIA C2-01 – RM-721/
NOKIA C2-02 -RM-692/
NOKIA C2-03 – RM-702/
NOKIA C2-05 – RM-724/
NOKIA C3-00 – RM-614/
NOKIA C3-01 – RM-640/
NOKIA C3-01 – RM-776/
NOKIA C5-00 – RM-645/
NOKIA C5-00 5MP – RM-745/
NOKIA C5-03 – RM-697/
NOKIA C5-03.2 – RM-719/
NOKIA C5-06 – RM-816/
NOKIA C6-01 – RM-718/
NOKIA C7-00 – RM-675/
NOKIA E5-00 – RM-632/
NOKIA E50 – RM-170/
NOKIA E50 – RM-171/
NOKIA E51 – RM-244/
NOKIA E51-2 RM-426/
NOKIA E52 – RM-469/
NOKIA E55 – RM-482/
NOKIA E6-00 – RM-609/
NOKIA E60 – RM-49/
NOKIA E61 – RM337/
NOKIA E63 – RM-437/
NOKIA E65 – RM-208/
NOKIA E66 – RM-343/
NOKIA E7-00 – RM-626/
NOKIA E71 – RM-346/
NOKIA E71 – RM-407/
NOKIA E72 – RM-530/
NOKIA E72 – RRM-529/
NOKIA E75 – RM-413/
NOKIA E90 – RA-6/
NOKIA Lumia 1020 – RM-875/
NOKIA Lumia 1320 – RM-994/
NOKIA Lumia 510 – RM-889/
NOKIA Lumia 520 RM-914/
NOKIA Lumia 620 RM-846/
NOKIA Lumia 625 – RM-941/
NOKIA Lumia 720 – RM-885/
NOKIA Lumia 800 – RM-801/
NOKIA Lumia 820 RM-825/
NOKIA Lumia 900 – RM-823/
NOKIA Lumia 920 – RM-821/
NOKIA Lumia 925 – RM-910/
NOKIA N8 – RM-596/
NOKIA N9 – RM-696/
NOKIA N97 – RM-505/
NOKIA N97 – RM-555/
NOKIA X Android phone/
NOKIA X+ Dual SIM – RM-1053 – V 1.1.0.2/
NOKIA X1-00 – RM-732/
NOKIA X1-01 – RM-713/
NOKIA X2-02 – RM-694/
NOKIA X2-05 – RM-772/
NOKIA X2.00 – RM-618/
NOKIA X3 – RM-540/
NOKIA X3-02 – RM-639/
NOKIA X3-02 – RM-775/
NOKIA X6 – RM-559/
NOKIA XL – RM-1030/
Nokia X2 Dual SIM – RM-1013/
လိုအပ်သူများ ဒီလင့် မှာ သွားရောက် ဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Credit To : Software Erab Web
ကဏ္ဍ Nokia, Phone Application
Nokia ဖုန်းတွေကို မြန်​မာ​ဖောင့်​​ ထည့်ကြည့်​ ရ​အောင်​
ကျွန်တော့်ကို တော်တော်များများက မေးကြလို့ ကျွန်တော် ရေးလိုက်ရပါတယ်။ Commemt တွေ မှာလည်း
တွေ့ ရပါတယ်...ကူပါအုံး...Nokia ဖုန်းကို မြန်မာဖောင့် ဘယ်လို ထည့်လို့ရမလဲ အကို ရေတဲ့...။
ဟုတ်ကဲ့ ဒီလို ထည့်ပါတယ်...
ပထမဆုံး ဖုန်းကို ဟက်ရ ပါမယ်။
ဒီတော့ အောက်က Nokia Hacking လေးတွေကို၊ အရင်​ဦးဆုံး​ ဒေါင်းလုပ်​ ဆွဲယူ ထားလိုက်​ပါ။
★DOWNLOAD Nokia Hacking Rar File★
ဒေါင်းပြီးရင် ဖုန်း memory card ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။
ဖုန်းထဲမှာ memory card တော့ ရှိထားရပါမယ်​။
NortonSymbian.sisx ကို Install လုပ်ပါ။
Install လုပ်ပြီးရင် အဲဒါကို Open ပါ
Quarantine list ကိုရွေးပါ
Yes or No ပေါ်လာရင် Yes ကိုနှိပ်ပါ
ပြီးရင် Exit ကိုနှိပ်ထွက်ပါ။
ဖုန်း Settings ထဲ Application mgr(manager) ကိုသွား ကျလာတဲ့ အထဲက Symantec Symbian H***
ဆိုတဲ့ စာတန်းကို ရှာပြီး uninstall လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်​ပြန်​ထွက်​လိုက်​ပါ။
ခုနဒေါင်းထားတဲ့ အထဲက RomPatcherPlus_ 3.1 lite.sisx ကို install လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် RomPatcherPlus ဆီသွားပြီး ဖွင့်ပါ
Install Server RP+ နဲ့ Open4all RP+ ဖိုင်နှစ်ခုကိုတွေ့ ရပါမယ်
All Patches ကို နှိပ် Apply ကိုထပ်နှိပ်ပါ
နောက်တခုလည်း အဲ့ဒီ အတိုင်းလုပ်ပါ
ဒါဆိုရင် ဖုန်းကို ဟက်တဲ့ အဆင့် ပြီးသွားပါပြီ ဖောင့်ထည့်ဖို့ပဲ လိုပါတော့မယ်။
ခုနဒေါင်းထားတဲ့ အထဲမှာ မြန်မာ ဖောင့် ပါပါတယ် Memory crad ထဲ ရောက်နေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ထည့်ထားတဲ့နေရာ မှာသွားရှာပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။သူဘာမေးမေး လုပ်မယ်ပဲ ဖြေပေးပါ၊ဲပြီးပြီဆို
တာနဲ့ ကဲ နားညီးအောင် လာလာပြောနေတဲ့ ဘော်ဒါ အပေါင်းတို့ ဖုန်းကို Restart သာ ချလိုက်ပါတော့ဗျာ။
ဟက် လို့ရတဲ့ ဖုန်းရဲ့ model တွေပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းက ဘာ model လဲဆိုတာ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ။
Symbian O 9.1
*. Nokia 3250
*. Nokia 5500 Sport
*. Nokia E50
*. Nokia E60
*. Nokia E61
*. Nokia E61i
*. Nokia E62
*. Nokia E65
*. Nokia E70
*. Nokia N71*. Nokia N73
*. Nokia N75
*. Nokia N77
*. Nokia N80
*. Nokia N91
*. Nokia N91 8GB
*. Nokia N92
*. Nokia N93
*. Nokia N93i
*. Samsung SGH-i570
*. LG KS10
*. LG KT610
*. LG KT615
*. Nokia 5700 XpressMusic
*. Nokia 6110 Navigator
*. Nokia 6120 Classic
*. Nokia 6121 Classic
*. Nokia 6124 classic
*. Nokia 6290
*. Nokia E51*. Nokia E63
*. Nokia E66
*. Nokia E71
*. Nokia E71x
*. Nokia E90 Communicator
*. Nokia N76
*. Nokia N81
*. Nokia N81 8GB
*. Nokia N82
*. Nokia N95
*. Nokia N95 8GB
*. Samsung SGH-G810
*. Samsung SGH-i400
*. Samsung SGH-i408
*. Samsung SGH-i450
*. Samsung SGH-i458
*. Samsung SGH-i520
*. Samsung SGH-i550
*. Samsung SGH-i550w
*. Samsung SGH-i560
*. Samsung SGH-i568
Symbian O 9.3
*. Nokia 5320 XpressMusic
*. Nokia 5630 XpressMusic
*. Nokia 5730 XpressMusic
*. Nokia 6210 Navigator
*. Nokia 6220 Classic
*. Nokia 6650 fold
*. Nokia 6710 Navigator
*. Nokia 6720 Classic
*. Nokia 6730 Classic
*. Nokia 6760 Slide*. Nokia 6790 Surge
*. Nokia C5-00
*. Nokia E5-00
*. Nokia E52
*. Nokia E55
*. Nokia E72
*. Nokia E73 Mode
*. Nokia E75
*. Nokia N78
*. Nokia N79
*. Nokia N85
*. Nokia N86 8MP
*. Nokia N96
*. Nokia X5
*. Samsung GT-i8510 (INNOV8)
*. Samsung GT-I7110
*. Samsung SGH-L870
Symbian Os9.4 (Corresponds to Symbian^1 )
*. Nokia 5228
*. Nokia 5230
*. Nokia 5233
*. Nokia 5235
*. Nokia 5250
*. Nokia 5530 XpressMusic
*. Nokia 5800 XpressMusic
*. Nokia 5800 Navigation Edition
*. Nokia C5-03
*. Nokia C6-00
*. Nokia N97
*. Nokia N97 mini
*. Nokia X6
*. Samsung i8910 Omnia HD [ 8 ]
*. Sony Ericsson Satio
*. Sony Ericsson Vivaz
*. Sony Ericsson Vivaz Pro
Symbian^3 (or PR1.0,1.1,1,2,Symbian Anna ) 5.2 9.5
*. Nokia X7
*. Nokia E6
*. Nokia 500
*. Nokia 702T
*. Nokia T7
*. Nokia C6-01
*. Nokia C7-00
*. Nokia E7-00
*. Nokia N8
Symbian^3 (or Symbian Belle )
*. Nokia 600
*. Nokia 700
*. Nokia 701
ဒီ model တွေ အထဲမှာမှ ကိုယ့်ဖုန်း model မပါသေး ရင်တော့ လည်း sorry ပါ။
From: Internet for Myanmar by ကိုဇော်သွင်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, July 09, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Nokia, Phone Application, မြန်မာဖေါင့်
Nokia XL Android Phone Install TWRP
အသစ် ထွက်ရှိ လာတဲ့ ” Nokia Android ” ဖုန်းတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် TWRP လေး တင်ပေး
လိုက်ပါတယ် နောက်ပိုင်း ” Nokia Android ” ဖုန်းတွေကို One Click Root တွေနဲ့ အဆင်မပြေ တော့ပါ
ဒါကြောင့် ဒီကောင်လေး တင်ပေးလိုက် တာပါ။
သွင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုတော့ ဘူးနော် ဖုန်းကို Battery ဖြုတ် ပြန်တပ်ပြီး ပုံမှန် အတိုင်း
Recovery mode Key ခေါ်ပြီး Super Su zip ဖိုင်လေး သွင်းယုံပဲနော်။
One Click နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ပြုပြင် ကလိပေး ထားပါတယ်ဗျာ။
ပြီးရင် ကွန်ပြူတာမှာ ဖြည်ပြီး ဖုန်းကို Normal mode မှာ ကြိုးထိုးပြီး အထဲက Bat file လေးကို Run ယုံပဲနော်
From : Myanmar Mobile Software Developer by nyipaing
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Sunday, June 22, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Nokia, Phone Application
Nokia X ကို Google App ထည့်သွင်းနည်း
ယခု Mobile ဈေးကွက်ထဲ ၀င်လာတဲ့ Nokia X ဖုန်း အတွက် Gapps သွင်းနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လိုအပ်သော ဖိုင် Nokia X Gapps ကို အောက်တွင် ဒေါင်းယူပါ။
ပထမဦးစွာ ဒေါင်းထားသောဖိုင်လေးအား ဖြည်ချပါ
အထဲတွင် 1. Root explorer apk 2.Nokia X Gapps Data 3.Nokia X Gapps Normal ဆိုပြီး
(၃) ခုပါ ပါလိမ့်မယ်။
Data နဲ့ Normal ကို ဖြည်ချ ထားပါ Root explorer apk ကို install လုပ်ထားပါ
ထို့နောက် Data ထဲမှ ဖိုင်နှင့် apk များကို ဖိုင်လိုက် Internal Or SD ထဲထည့်ပါ
ပြီးလျှင် Root explorer ထဲဝင်ပါ မိမိထည့် ထားသော ဖိုင်ရှိသည့် နေရာသို့ ရောက်အောင်သွားပါ
ပြီးလျှင် ဖိုင်အတွင်းမှ Apk နှင့် data အားလုံးအား system ထဲရှိ app ထဲသို့ အကုန်ကူးထည့်ပေးပါ
ထို့နောက် ထည့်ထားသော app များကို system app များကဲ့သို့ permission အား rw-r--r-- ပြောင်းပေးပါ။
သတိ - app များ အကုန်ပြောင်းပေးရန် လိုအပ် ပါသည်။
ပြောင်းပြီးလျှင် ပြန်ထွက်ပြီး ဖုန်းကို Reboot ချပေးပါ
ပါဝါပြန်တက် လာလည်း မည်သည့် Gapp မှမြင်ရမည် မဟုတ်သေးပေ
ထို့နောက် NokiaX Normal ဖိုင်ထဲမှ Application များအား သာမန် application သွင်းသကဲ့သို့
အကုန် Install လုပ်ပြီးလျှင် Reboot ချ ပေးပါ။
ပါဝါတက်လာလျှင် Nokia X ဖုန်းတွင် Google apps များအား အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
@ung khaing (MDY)
Aung Khaing ( Mobile Sharing )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 17, 2014 No comments:
အရင်ဆုံး Nokia account တော့ ရှိရမည် ပြီးရင် N9 ထဲမှာ ပါတဲ့ Store ထဲက Fontmanager – Mesinput ဆိုတာလေးကို အောက်မှာ ဒေါင်းပေးပါ။
Fontmanager – Mesinput
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ဒီအောက်က ဖောင့်လေးကို ဒေါင်းပေးပါ …။
ဒေါင်းလိုရလာတဲ့ Font ကို Phone ထဲ ထည့်ပါ
ပြီးရင် စောန က ဆွဲလိုရတဲ့ fontmanager ဖွင့်ပါ
ဘယ်ဘက်ဘေးက ( + ) လေးကို နှိပ်ပေးပါ
MyDous > DroidSansFallback.tft ကိုရွေးပေးပါ
အကုန်လုံးကို အမှန်ခြစ်ပြီး install လုပ်ပေးပါ ကဲ မြန်မာဖောင့်တော့ ပြီးစီးပါပြီ …
Keyboard လေး ထည့်ရအောင် စောနက ဆွဲလိုရတဲ့ Mesinput ကိုဖွင့်ပါ
Popular keyboards > Myanmar Zawgyi ဆိုတာကို install Keyboard တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ
setting > Time and language > Text input ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာ Keyboard လေးရောက်နေပါပြိ
message box ကိုသွားပြီး စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ
MyanmarKeyboard သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘေးတိုက်ပွတ်ဆွဲတာနဲ့တင် Myanmar Keyboard စ
တင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ …။
လေ့လာသီရှီတဲ့ Page တွေများလို့ … Creadit ပေးသင့်သူများအားလုံးကို Creadit ပေးပါတယ်ခဗျာ …
Myanmar Mobile App Store မှကူးယူမျှဝေသည်။
ကဏ္ဍ Nokia, Phone Application, မြန်မာကီးဘုတ်, မြန်မာဖေါင့်
Nokia ဖုန်းတွေ အတွက် Nokia Software Recovery Tool
မင်္ဂလာပါ နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သ လိုက်ပါတယ်...။
ဒါ​လေး က​တော့ Nokia ဖုန်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Software Update Problem ဖြစ်နေခြင်း၊ Phone is
not responding ဖြစ်နေခြင်း၊ Repair လုပ်ဆောင်ခြင်း တွေအပြင် Recover/ Reset/ Restore စ တာ
တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Recovery Tool လေးပါ...။
Nokia ဖုန်းတွေ အတွက် သက်သက် ထုတ်လုပ် ထားတဲ့ Tool လေးပါ...။
Use the Nokia Software Recovery Tool to recover your Lumia WP8 phone if you have software or software update problems. If your phone is not responding, it appears to be stuck or is not starting you can try to recover it at home before initiatingarepair.
If possible, you should makeabackup of your phone’s data before using the Nokia Software Recovery Tool.
Find answers to your questions in Nokia Software Recovery Help
To get help and find answers to your questions about Nokia Software Recovery Tool, open the Nokia Software Recovery Tool and click on the “?” symbol from any screen.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 12, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ Nokia, Phone Application, Recover, Tools
Nokia X - X+ and XL တွေကို Root ဖေါက်နည်း
Nokia X , X+ , XL တွေကို Root ဖေါက်နည်းလေးပါ.. စမ်းစရာမရှိသေးလို့ မူရင်းအတိုင်း ပြန်
လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ Framaroot 1.9.1 ဆိုတဲ့ APK လေးကို Phone ထဲမှာပဲ Install
လုပ်ပြီး Root လုပ်ပေးရမှာမို့ လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေမှာပါ...။
Useafile manager app (Astro or ES File Explorer, for example), navigate to the location of Framaroot-1.6.1.apk, and install the application.
Make sure you have enabled installation of apps from unknown sources by going to Settings > Security and ticking the Unknown sources checkbox.
ကဏ္ဍ Android, Nokia, Phone Application, Root
Nokia_Suite_webinstaller_ALL ( for PC )
Nokia မိတ်ဆွေများ အတွက် Nokia နဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ပေးမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကောင်းလေး
Nokia_Suite_webinstaller_ALL ဆိုတာလေးပါ.. စမ်းပီးသုံးကြည့်လိုက်စေ ချင်ပါတယ်..
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, November 24, 2013 No comments: